25 अचम्मका तथ्यहरू ... turd
केही कारणको लागि, शितीबारे कुरा गर्दा खराब रूप मानिन्छ। र यो धेरै अजीब छ। सबै पछि, सबै चीजहरू कडा छ: कीराहरू, जनावरहरू, चराहरू, माछाहरू, र मानिसहरू।
मलहरूसँग हामी हरेक दिन आउँदछौं, र हामीमध्ये प्रायजसो तिनीहरूका बारेमा मात्र थाहा पाउँछौं कि यो लुगाफाटा मुर्दा पदार्थ हो। तर यो, निस्सन्देह, उत्तेजना को बारे मा सबै तथ्यों छैन। तपाईले लेखबाट छोटो बारेमा थप जान्न सक्नुहुनेछ।
1. पीडितको कारणले पुनरावर्ती दस्तबाट पीडित मानिसहरू फेसल प्रत्यारोपण गर्न सक्छन्।
एक स्वस्थ व्यक्ति को मल संग एक साथ, रोगी आंत माइक्रोबायोटा संग प्रत्यारोपण गरिन्छ। "स्वस्थ" सूक्ष्मजीवणहरूले सक्रियता बढ्न थाल्छन् र अन्ततः आणुको सामान्य महत्त्वपूर्ण गतिविधिको लागि ब्याक्टेरियाको कमीको लागि क्षतिपूर्ति गर्दछ।
2. कुनै समय भए तापनि, खारेज गरिनेछ।
तथ्य यो छ कि मलहरू केवल आंशिक रूपले प्रशोधन गरिएको भोजन समावेश हुन्छन्। यसको अतिरिक्त, तिनीहरूको संरचनामा ग्यास्टिक र आंत का रस, स्रावण उत्पादनहरू समावेश छन्।
3. पुस्तकालयको प्रवेशमा खारेज गर्ने आग्रह छ भने 3. घन्टी नगर्नुहोस्।
यो मारिको आकी घटना हो। ठूलो द्वारा जाने इच्छा को रूप मा, स्याही को मसी को गंध को रूप मा र कागज सज्जन केन्द्र मा पुग्छ। सुँगुरको जलाशय प्रभाव यो तथ्यले बताउँछ कि मान्छेले तिनीहरूलाई सहज अवस्थामा पढ्न, शौचालयमा पढ्न सहयोग गर्दछ।
4. यो जान्छ कि केहि जनावरहरूले आफ्नो मल खाए। तर मानिसहरूले पनि यस्ता एन्टिन्कहरू पनि खर्च गर्न सक्छन्।
यो घटना "coprophagia" भनिन्छ। चिकित्साले पनि6वर्षीया केटीले आफ्नो उत्तेजना खाएपछि यो मामलालाई थाहा छ र शरीरमा उनीहरूलाई लुट्न मन पराउँथ्यो। उनको उपचार गर्न, डाक्टरहरूले पनि झूटो मल बनाउन थाल्छन्।
5. केही ऐतिहासिक अभिलेखहरूका अनुसार, पुरातन मिस्रहरूले गर्भनिरोधकहरूको लागि मगरमण्डल छाल प्रयोग गरे।
6. प्रस्थान, अपोलो 11 को चालक चन्द्रमा धेरै कुराहरू छोडे: जूता, एक जैतून शाखा र नील आर्मस्ट्रांगको मल।
7. अचानक पेट मुर्ख हुन्छ जब एक पेशेवर एथलीट रहन यो गाह्रो छ। तर लैरी इजो को मामला मा नहीं।
यस फुटबल खेलाडीले खेलको समयमा बाहिरिने दायाँको आवश्यकता बनायो - र त्यसो गरेकि कसैले पनि ध्यान दिएन - र सफापूर्वक प्रणालीमा फर्कियो।
8. चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले निर्णय गरेका छन् कि पाण्डाहरूलाई प्रेम बासोमा फाइदा लिन सकिन्छ र यी जनावरहरूको उत्थानबाट शौचालय पेपरको उत्पादनको लागि प्रविधिहरूको अध्ययनमा व्यस्त हुन सक्छ।
9 के तपाईं चाहानुहुन्छ - विश्वास, चाहानुहुन्छ, र तपाईंको मलमा बहुमूल्य धातुहरू छन्।
उदाहरणका लागि, सुन, चांदीको रूपमा। केही अनुमानहरूको अनुसार, एक लाख अमेरिकी डलरले $ 13 मिलियनमा बहुमूल्य धातुहरू पम्प गर्न सक्छ।
10. अफ्रिकामा युद्धको क्रममा, नाजिसहरू एक परम्परा थियो - उनीहरूले विश्वास गरे कि ऊ भाँडा चलाएर ट्यांक निकाल्यो - भाग्य। यो सिक्न, सहयोगी मित्रहरूले "खुसी ढङ्गमा" मा खानहरू लुकाउन थाले।
11. पुरातत्वविदहरूले कहिलेकाहीँ पतित मलहरू फेला पार्छन्। तिनीहरूलाई coprolites भनिन्छ। त्यस्ता निष्कर्षहरू एक दुर्लभ हुन्छन्।
12. मानव उत्खनन द्वारा संचालित पहिलो ब्रिटिश बस मार्ग को लम्बाई, 24 किमी थियो। स्थानीयहरूले पहिले नै उहाँलाई "काकाशबश" नामकरण गरेका छन्।
13. मलहरू सजिलै उभिन्छन्। न्यूयर्कमा एक गर्मीमा विषमकारी तापक्रम देखि, त्यहाँ भट्ठा उत्तेजना को एक दहन दहन थियो।
आगोको ठूलो ठूलो भागमा भत्क्यो। यसले यसलाई चिन्ता गर्न लगभग दुई घण्टा लाग्यो र यसले तीन वटा आगो लगायो।
14. स्लॉट्सको लागि, भेषको कार्य मृत्युको कारण हो। समस्या यो हो कि अधिकांश जानवरहरु यो पेडहरु मा पेडहरुमा खर्च गर्छन, र उनलाई एक हफ्ते मा एक पल्ट एक पल्ट घातक छ, ​​जहां उनि सबै भन्दा कमजोर हो।
15. उन्नीसवीं शताब्दीमा, न्यू यर्कर्सले समस्याको सामना गरे - सडकमा शाब्दिक घोडामा डुबाइएका थिए, जसमा धेरै घोडा-गाह्रो वाहकहरू बाँकी रहेका छन्।
कति घोडाहरू घोडाहरू हेर्दै, मानिसहरूले पनि कारहरू धेरै अनुकूल मित्र बनाए।
16. यो विश्वास गर्न गाह्रो छ, तर दुबईको उच्चतम स्किस्क्र्यापरमा कुनै सिभर प्रणाली छैन। भवनबाट सबै मलहरू ट्रकबाट बाहिरिएका छन्।
17. तथ्यको बावजुद मलहरू प्रायः ठोस हुन्छन् र आकारमा राख्छन्, यो 75% पानी हो।
18. जापानी महिलाहरूले रात्रिला उत्खननले छाला पुनरुत्थान गर्न र उमेर बढाउने प्रक्रियालाई कम गर्न सक्छ र उनीहरूको अनुहार मास्क बनाउँछ। देवताहरूको चमत्कारको प्रभाव अनुभव गरेको देवताहरूले पक्षीको गोठालाहरूसँग गम्भीर गन्धको अर्थ राख्छन्।
1 9। हरियो मलले मानिसलाई घृणा गर्दछ। तर मल को रंग बदलन को कारणहरु लाई पूरी तरह हानिकारक हुन सक्छ - जस्तै आहार मा एक हरी हरी, उदाहरण को लागि।
20. एक दिन जर्ज क्लोनीले आफ्नो छिमेकीको बारेमा चिन्ता गरे र उनको बिरालोमा ट्रेवलमा गए। मजाक एक सफलता थियो। दुर्भाग्यवश छिमेकीले गम्भीर निर्णय गरे कि उनको पालतू समस्या।
21. केही क्याटरपिलहरू 1.5 मीटर सम्मको दूरीको लागि छाल "गोली" गर्न सक्छन्। त्यसैले कीराहरूले आफ्नो जालहरू रक्षा गर्छन्।
22. कोलम्बोसोस्कोपीलाई नफरतको धेरै कारणहरू छन्, तर यो एक केकमा चेरी जस्तो छ।
के तपाईंलाई "अष्ट्रेलिया ग्याँसहरूको विस्फोट" को रूपमा अस्तित्वको बारेमा थाहा पाउनुभयो? र यो वास्तवमा हो। घटना जस्तै वर्णन गर्दछ। सौभाग्य देखि, विस्फोट धेरै हुन्छ, धेरै, धेरै नै राम्ररी।
23. न्यानो बालुवाको वरिपरि दौडने प्रेमीहरू मनमा राख्नुहोस्: वास्तवमा, तपाईं पाराफिफको मलहरूमा फ्रोजन गर्न सक्नुहुनेछ।
तिनीहरू कोरल खान्छन्, जो किरीको दालमा पाईन्छ। तथ्याङ्क अनुसार, वर्षको लागि माछाको लगभग 400 किलोग्राम बालुवा उत्पादन गर्दछ।
24. अत्यन्तै दुर्लभ परिस्थितिमा अत्यन्तै गंभीर कब्जानुसार, जब मलहरूले शरीरलाई प्राकृतिक तरिकामा छोड्न सक्दैन, मानिसहरूले फ्याक्कै उल्टो सुरु गर्न सक्छन्।
25. यो पहिलो नजरमा मात्र हो। एडिली पेंगुइनहरू सुन्दर छन्।
जर्ज र अमल क्लोनीले मेगन मार्कल र प्रिन्स हैरी को विवाह को दौरा गरे
ओमेलेट देखि रापुन्जेल: मेटा गाला मा रिहाना को सबै भन्दा सुन्दर छवियों मध्ये 8:
एकदम दम्पती: मेटा गला 2018 मा जर्ज र अमल क्लोनी र घटना पछि पछि पार्टी
वास्तवमा, यी अझै पनि डाईटहरू छन् जुन लिटर फेंक गर्न सकिन्छ 40 सेन्टिमिटर सम्म।
टेलिभिजनका रोलहरूमा सानो संसार
आधुनिक मोगोलीको बारेमा 12 चौंकाउने कथाहरू
Instagram मा आईस्सेलीका पुलिसको 11 अप्रत्याशित दृश्यहरू
10 अनोखी व्यक्ति, जसको अस्तित्वमा विश्वास गर्न असम्भव छ!
शॉक! यी 15 फोटोहरू आपत्तिजनक छिट्टै पहिले बनाइयो
यी तस्विरले तपाईंको जीवनलाई जीवनमा परिवर्तन गर्नेछ!
45 बारकोड जसले डिजाइनरहरू पुग्यो
प्रवेश द्वारबाट 30 विज्ञापनहरू जुन तपाइँलाई स्वभाविक भेट्टाउन सक्नुहुन्न!
नूह एकमात्र व्यक्ति हो जसले डाइनासोरलाई जलप्रलयबाट बचायो!
यी 35 रेट्रो दृश्यहरूले तपाईंलाई मुस्कान र आँसु दिनेछ!
लेजर संग बच्चाहरु मा adenoids को उपचार
बिल्लियों मा मधुमेह mellitus
केसेरेन खण्ड पछि के तपाईं खाना खाउनुहुन्छ?
एक वृद्धिमा भोजन
47 वर्षीया केली माइगोले विवाह गरे
आत्मविश्वासको लागि सम्भावना
हड्डीहरूमा हेरपेस - कारणले गर्दा र चाँडो उपचार
कार्बन मोनोअक्साइड विषाक्तता - लक्षणहरू
टमाटरहरूसँग आइपुग्ने - सरल र स्वादिष्ट बर्तन पकाउने सबैभन्दा राम्रो विचार
चिपकने वाला टेप को मदद संग 12 कील कला को 12 विचारहरु
भित्री कपालको लागि मास्क - क्यान्सरबाट बच्न एक उत्तम तरिका
बेडरूमको लागि तालिकाहरू ड्रेसिङ गर्दै
एलिजा कैलाली - शरद ऋतु 2016-2017
पेट वा पेटले बच्चालाई टाउको दुख्छ
राजकुमार बेटिसले एड चिरकको आँखाबाट बाहिर निस्क्यो
सजावटी प्रसाधन सामग्री
कोट मा फर गारील्ड - इटाली
Cerro Torre (चिली)